5 na-ezube ịnụ ụtọ okpomọkụ na Ista | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | Getaways, General
La Ista bu otu nzọ ụkwụ, na otu Carnival si dị nso, nke anyị ka gbakere n'oge na-adịbeghị anya, anyị nwere obere oge iji hazie njem maka ezumike a ọzọ. Ọ bụrụ na e nwere ihe dị anyị mkpa, ọkachasị na mpaghara ndị ahụ mmiri na-ezo karịa, ọ bụ ntakịrị ntakịrị anwụ na okpomọkụ, yabụ taa anyị ga-ahụ ọmarịcha ebe 5 iji nwee ọ weatherụ ezigbo ihu igwe n'oge Ista.
Ma ị chọrọ a njem dị ọnụ ala dị nso n'ụlọDị ka a ga - asị na ịchọrọ ịchụpụ ụlọ na windo wee mee otu n'ime njem nrọ ndị ị na - ebu n'uche mgbe niile, ị nwere nnukwu nhọrọ. Rịba ama ebe ndị mara mma iji nwee oge dị mma na anwụ, yana ụfọdụ ihe mgbakwunye agbakwunyere.
1 Lee ndị Nazaret na Seville
2 Gaa saa ahụ na Gran Canaria
3 Ntughari na Marrakech
4 Osimiri na ụlọ arụsị na Thailand
5 Riviera Maya Vacations
Lee ndị Nazaret na Seville
Nke a bụ otu n'ime atụmatụ ndị ga-arụ ọrụ oge niile, ọ bụkwa na ọ bụrụ na ị na-ebi n'izu Nsọ dị nsọ na ntinye ofufe ebe ọ dị na Seville, ọ na-esokarị ihu igwe dị mma. Ọ bụrụ na anyị gaa Seville ọ bụ iwu na ị ga-ahụ ụfọdụ otutu ndi mmadu ma obu nwanne, nke ndị Nazaret mebere na steepụ, nke bụ ihe oyiyi okpukpe nke ndị na-ebu ya. Have ga-achọpụta usoro iheomume na kwa okporo ụzọ ngafe iji nọrọ ebe ahụ tupu oge eruo, ma ọ bụrụ na anyị anaghị efe ofufe nke ọma, ọ kacha mma ịhọrọ okporo ámá ndị sara mbara karị, ka ịghara iche na ọtụtụ mmadụ gafere anyị.
Usoro a na - abakarịkarị ihe dị ka elekere asaa nke ehihie na abụọ nke ụtụtụ, yabụ anyị ga - enwe oge ịhụ ole na ole ma gakwa kporie nnukwu ihe ncheta nke a mara mma na anwụ na-acha obodo. N'ụtụtụ na akụkụ nke ehihie anyị nwere ike ịhụ Giralda ama ama na Katidral, ma ọ bụ Real Alcázar. Anyị ga-enwe izu ike izu ụka, mana ọ ga-abụ ọpụrụiche pụrụ iche.
Gaa saa ahụ na Gran Canaria
Ọ bụrụ na isi ihe dị na Seville bụ usoro ngagharị, na Gran Canaria anyị nwekwara ike ịnụ ụtọ ha, mana ebe a ihe kachasị mma bụ iji ụbọchị nọrọ n'ụsọ osimiri. N'ehihie ị nwere ike saa ara na sunbathe na-ejide ọkụ ọkụ nke ndị ọrụ ibe gị ga-enwere anyaụfụ mgbe ị laghachiri ọrụ. A na-atụ aro osimiri dịka Maspalomas, Playa del Inglés ma ọ bụ Meloneras. Ihe ndị ọzọ ị ga-eme bụ ịga na ogige ihe mgbe ochie Cueva Pintada, ma ọ bụ gaa ije na Maspalomas Dunes Natural Reserve. Ọ bụrụ na anyị na ụmụntakịrị gaa, ihe kachasị mma bụ ịkwụsị site na ọdọ mmiri Aqualand na Maspalomas, ma ọ bụ gaa Sioux City, ogige ntụrụndụ nke ewepụtara maka American Wild West.
N'aka nke ọzọ, mgbe anyị nwesịrị ọtụtụ ihe ntụrụndụ, anyị nwekwara ụdị usoro izu ụka dị nsọ, karịsịa na obodo Las Palmas na etiti ehihie. Enwere usoro nke nnukwu ụbọchị izu ụka, yana usoro nke Mantillas ma ọ bụ Via Crucis del Silencio.
Ntughari na Marrakech
Nke a bụ ebe njem na-adịghị anya n’ebe anyị nọ, nke ahụ dịkwa iche na ihe anyị nwere ike ịchọta ebe a n’oge Ista. Ọ bụrụ na ike gwụrụ anyị na nzukọ na omume okpukpe, na Marrakech anyị ga-ezere ihe a niile ma nwee ihu igwe ọkụ. Nwere ike iju anyị anya site na mkpọtụ nke Jamaa el Fna squareMa ọ bụ gaa na amaala Koutoubia mara mma ma ọ bụ Badi Obí. Enwere ọtụtụ ebe iji chọpụta ọdịnala Moroccan.
Osimiri na ụlọ arụsị na Thailand
Thailand bu otu n'ime ihe ndi mmadu choro maka ocha ya na ego ole o gha enye n'usoro omenala na oghere. O nwere osimiri mara mma nke nwere uzo uzo di ka nke nke mpaghara krabi, ebe Koh Phi Phi dị, ebe eserese 'The Beach', yana ọtụtụ agwaetiti enwere ike ileta site na enyemaka nke ụgbọ mmiri ọdịnala.
Ọ bụrụ na anyị na-achọ ebe obibi obodo mepere emepe iji chọpụta otu esi agakọ oge a na ọdịnala ọdịnala, ị nwere isi obodo, Bangkok, ebe ị nwere ike ịga Buddhist temple na nnukwu obí, mgbe ị na-anụ ụtọ afọ nri na nkasi obi nke oge a.
Ọ bụrụ na anyị ga-eme ihe n'ụzọ dị ukwuu, gịnị ma ị ga-akụ onwe anyị n'otu ebe anwụ na-acha nke jupụtara n'ụsọ osimiri na ebe ntụrụndụ dị ka Riviera maya. Anyị ga-enwe anyanwụ na osimiri zuru oke, anyị ga-enwe ike ịhụ foduru nke mmepeanya Mayan.
Chichen Itza Ọ bụ obodo Mayan kacha mara amara, yana otu ihe ịtụnanya asaa dị n’ụwa. N'ime obodo Mayan anyị nwere ike ịchọta Templelọ Nsọ nke otu puku puku ma ọ bụ Pyramid nke Kukulkán. Tulum bu ihe kwesiri, obodo Mayan nke nwere ikike nke ịnọ n'ụsọ Oké Osimiri Caribbean. Anyị ga-enwe osimiri na turquoise mmiri na akụkọ ihe mere eme n'otu oge. Ebe ọzọ ị ga-eleta bụ Puerto Aventuras, obodo ọdụ ụgbọ mmiri nke nwere oke osimiri dị mma ma dịkwa mfe ịnweta ogige ndị ama ama Xel-Ha na Xcaret.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways » 5 na-ezube ịnụ ụtọ okpomọkụ na Ista
Osimiri 9 kacha mma na Santo Domingo